0 Thursday July 09, 2020 - 07:47:41
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya fal naxdin leh oo xalay ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Thursday July 09, 2020 - 06:17:40
Hormuud Salaam Foundation waxay ogeysiinaysaa Ardayda ka baxday Dugsiyada Sare ,gaar ahaan sanad dugsiyeedka 2018/2019 & 2019 /2020 in la qaadi doono Imtixaankii lagu codsanayey Deeqda Waxbarasho ee sanadlaha ah ee shirkada Hormuud Telecom. Imtixaanka waxaa la qaadi doonaa 4 & 5 August 2020, wuxuuna…
0 Thursday July 09, 2020 - 06:16:40
0 Wednesday July 08, 2020 - 17:08:56
0 Wednesday July 08, 2020 - 16:49:58
0 Wednesday July 08, 2020 - 16:47:58
0 Wednesday July 08, 2020 - 12:24:36
Faah faahin dheeri ah ayaa laga helayaa qarax khasaara dhaliyay oo bartamaha magaalada Muqdisho lagula beegsaday gaari ay la socdeen askar iyo saraakiil katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Wednesday July 08, 2020 - 11:46:32
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in boqolaal katirsan ciidamada dowladda Federaalka laga saaray saldhig ay ku sugnaayeen.
0 Wednesday July 08, 2020 - 11:02:41
0 Tuesday July 07, 2020 - 18:28:38
Wararka ka imaanaya deegaannada dhaca duleedka galbeed ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in markale halkaas uu ka dhacay weerar dil ah oo lagu khaarijiyay sarkaal ciidan.
0 Tuesday July 07, 2020 - 18:25:14
0 Tuesday July 07, 2020 - 11:30:44
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro shalay deegaanno katirsan gobolka Sh/hoose lagula beegsaday ciidamo katirsan soo duulayaasha AMISOM.
0 Tuesday July 07, 2020 - 11:29:44
War rasmi ah oo kasoo baxay madaxtooyada dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in laqaaday gabi ahaanba xaaladdii bandawga aheyd ee ka dhalatay caabuqa Covid19.
0 Tuesday July 07, 2020 - 11:13:35
Duqeyn ay diyaarado casri ah laba habeen ka hor ay ka geysteen saldhig melleteri oo kuyaal galbeedka wadanka Liibiya ayaa la sheegay in aysan geysan khasaara lixaad leh.
0 Tuesday July 07, 2020 - 09:04:48
Wadanka Itoobiya waxaa isbuucii labaad oo xiriir ah ka socda kacdoonno rabshada wata kuwaas oo markii dambe isku bedelay iska hor'imaadyo hubaysan.
0 Tuesday July 07, 2020 - 07:52:31
Khilaaf hor leh ayaa ka dhax qarxay maamul goboleedyada iyo dowladda Federaalka Soomaaliya kaas oo ku saabsan qaabka ay udhacayaan doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa baarlamaaniga ah.
0 Monday July 06, 2020 - 12:37:32
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in markale weerar khasaara dhaliyay lagula beegsaday maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Monday July 06, 2020 - 08:04:18
0 Monday July 06, 2020 - 07:29:54
Booliska dalka Switzerland ee dhaca bartamaha qaaradda Yurub ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan hal qof uu dhintay kadib markii xayawaanka Shabeelka loo yaqaan uu weerar geystay.
0 Monday July 06, 2020 - 07:03:04
Wararka ka imaanaya wadanka Lubnaan ee dhaca mandiqadda Shaaam ayaa sheegaya in dad hor leh ay naftooda gooyeen sababa laxiriira faqriga iyo nolol xumada wadankaasi ka jirta.
0 Sunday July 05, 2020 - 20:04:09
« Prev1 ... 3456789 ... 359Next »